सर्वश्रेष्ठ धातु नेमप्लेट्स निर्माण र अनुकूलन धातु नेमप्लेट निर्माताहरू | ऐलिस
निर्माताहरू जसले उच्च-गुणवत्ता लेबल लेबलेटहरू OEM सेवाहरू प्रदान गर्दछ
एल्युमिनियम लेबल ब्याजहरू
घरमा पहेलो बक्शडी कसरी व्यवहार गर्ने? नारी
जब बत्तीहरू र सार्नलनहरू छनौट गर्दछन्, प्राय जसो समयका लागि सबैले ठूला बत्तीहरू पहिलो हेर्नेछन्, तर कहिलेकाँही ठूला बत्तीहरू भन्दा व्यावहारिक हुँदैनन्। यद्यपि साना बत्तीहरू क्षेत्रका सर्तमा यति ठूलो हुँदैनन्, तर तिनीहरूको बिजुली असरहरूको लागि यसको लागि उपयुक्त छ, र अब सौंदर्यका लागि देखाइएको संख्या मात्र बढेको छैन।
कसरी छडी-एलिसमा बत्तीहरू कसरी हटाउने
बिजुली फर्निचरमा आँखा छ। घर सजावटमा बत्तीहरूको भूमिका केवल प्रकाशमा सीमित हुँदैन, तर पनि सजाइएको भूमिका हो।
कसरी गोलाकार रोप्दै बत्ती बत्तीको सनथकहरू कसरी खोल्ने
स il ्कर घुमाएर बत्तीहरू सामान्यतया खोलिएको छ; वर्ग प्रकारले सामान्यतया एक बकरा प्रयोग गर्दछ; त्यहाँ गिलास सफहहको तुलना पनि छ जुन भित्र भित्र तीनवटा स्प्रिडहरू द्वारा crampled छ, र बत्तीहरू तल बलियो तान्न; केही छत बत्तीहरू यो छत मा अडिन्छ, र छत गसुसेट यसलाई बदल्न हटाउन सकिन्छ। स्प्रि and ्गहरू देख्नुपर्दा बत्तीहरूलाई बिस्तारै तान्नुहोस्, तपाईंको हातले स्प्रिंगहरू एउटा थिच्नुहोस् र यसलाई लिनुहोस्, र त्यसपछि अन्य स्प्रि .हरू लैजानुहोस्।
कसरी प्रकाशक र छत-एलिस विच्छेदन गर्ने
राम्रो ज्योति घर सजावटको आत्मा बन्न सक्छ, र प्रकाशको छनौट घर सजावटमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एक छत प्रकाश छनौट गर्ने मुख्य बिन्दु भनेको स्थापना र पृथकता स्थापना गर्न सजिलो छ कि छैन भनेर हेर्नु हो, र यो पनि सफा हुनुपर्छ। दैनिक सफा प्रक्रियामा यसले धेरै समस्याहरूको बचत गर्नेछ, र भविष्यमा फेरि प्रतिस्थापन गर्न यो धेरै सुविधाजनक छ।
एकीकृत छेप्छ लागेको बत्तीहरू - एलिस कसरी स्थापना गर्ने
1. एकीकृत छत लाइट्स ज्योतिहरू स्थापना गर्न, तपाईंले पहिले स्थान छनौट गर्नुपर्नेछ। यो राम्रो हावावीकरणको साथ एक ठाउँ छनौट गर्न सिफारिस गरिन्छ।2. बैठक कोठाको भित्ताको गुणस्तर जाँच गर्नुहोस् भित्ता र पर्खाल को लागी एकीकृत छली प्रकाशको स्थापनाको बखत।The। स्पेसको छत क्वालिटी जाँच गर्नुहोस् जहाँ एकीकृत छत हाईलिंग प्रकाश स्थापना गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईंलाई लाग्छ कि यो पर्याप्त सुरक्षित छैन भने, यो छतमा एक सुरक्षा मापन को रूप मा एक प्रकाश स्टील ड्र्यागन कंकाल प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ।
कसरी एकीकृत छेप्छ लगाउन बत्ती सेतो शेड-एलिस
एकीकृत छत पूरा भएपछि, घरका बत्तीहरूको सजावट हुनु आवश्यक छ। एकीकृत छेस्केट बत्ती एक साझा विकल्प हो। त्यसो भए, रोकि पछि स्थापना भएपछि, यदि त्यहाँ एक गल्ती छ भने, कसरी एकीकृत छत बत्ती छायाँहरू हटाउन सकिन्छ?
कसरी एक गोल स is ्कल-एलिस स्थापना गर्ने
गोलाकार सैन्य स्थापनाको क्रममा विस्तार बोल्टहरू संक्षेपणको लागि प्रयोग गरिन्छ र विस्तारकर्ताको बत्तीको शैली र आकारका लागि कटिबद्ध हुन्छन्। गोलाकार प्रभावित बत्ती प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रियामा, यो प्रयोग गरिएको विस्तार र विशिष्ट पदहरू जान्नु आवश्यक छ जुन बल्बको प्रतिस्थापनमा केहि अनावश्यक समस्याहरू रोक्न सकिन्छ।
गोप्य सनहदेबे-एलिस को खरीद कौशल के हो
बत्तीहरू बत्तीहरू खरीदको लागि, सिफारिश गरिन्छ कि सबैलाई नियमित बजारमा खरिद गर्न ध्यान दिईन्छ, उत्पादनको उपस्थिति र आकारको सजावटको रूपमा ध्यान दिनुहोस्। माथिको बत्तीहरू र राउन्ड बत्तीहरू को खरीद कौशल कसरी स्थापना गर्नेको परिचय। तपाईं आफ्नै आवश्यकता अनुसार बत्तीहरू बत्तीहरू सर्न को उपयुक्त आकार छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
अडियो बनेका एक ग्राहकले अडियो बनाईएको छ कि 300,000 पीसीएस एल्युमिनियम Aluminum allaplayse अमेरिकी-अलीमा
अडियो उत्पादन गर्ने जर्मनीका एक ग्राहकले अडियोलाई 600,000 भन्दा बढी पीसीएस एल्युमिनियम Aluminum blayplatespletsts। आज, ग्राहकको नामयात जर्मनीमा ब्याचहरूमा वितरित गरिएको छ। यो जर्मन ग्राहकहरु को लागी दोस्रो पटक छ। तपाईको समर्थन र विश्वासको लागि धन्यबाद।
कसरी प्लास्टिकको बत्तीको बत्तीको पहेंलोसँग कसरी व्यवहार गर्ने
प्रत्येक परिवारले विभिन्न प्रकाश उत्पादनहरू स्थापना गर्दछ। प्रकाश बनाउनको लागि उत्तम सजावटी प्रभाव पार्नको लागि, बत्तीहरू स्थापना गर्न छनौट गर्नु स्वाभाविक हो, र यसले माटोबाट बत्तीलाई पनि बचाउन सक्छ। बत्तीहरू अझै सफा गर्न सकिन्छ। बत्तीहरूका लागि त्यहाँ धेरै प्रकारका सामग्रीहरू छन्, र प्लास्टिकको बत्तीहरू मात्र हुन्। लामो समय पछि, व्यक्तिहरूले पत्ता लगाउन सक्छन् कि यो पहेंलो हुन्छ, त्यसैले कसरी प्लास्टिकको संख्याको पहेंलो सामना गर्ने?
UAEMER ग्राहकहरु बाट ग्राहकहरु 50000PCS एल्युमिनियम एलिमनिन नेथर पोइन्टप्शेट्स
युनाइटेड अरब एमिरेटबाट एक ग्राहकले 500,000 पीसीएस एल्युमिनियम Aluminum almablesplets अनुकूलित। ग्राहकले हामीलाई सम्पर्क राख्यो र हामीलाई उसको नामपेट डिजाइन डिजाइन रेखाचित्र प्रदान गर्यो, र हामीले ग्राहकको रेखाचित्रहरूको आधारमा एक हप्ता भित्र नामबलको प्रमाण समाप्त गर्यौं। Alloy नेटप्लेट आउट मात्रा उत्पादन गरिएको छ। उनीहरूको समर्थन र ट्रस्टको लागि ग्राहकहरूलाई धन्यवाद।
के गर्ने यदि फक्स भेडाकोकिन बत्ती बत्तीहरू पहेलो-एलिस बदल्छ भने
यदि फ्याक भेडाकिक दीपाहरू पहेंलो परिणत भएमा मैले के गर्नुपर्छ? यहाँ तपाईलाई मद्दत गर्ने केहि तरिकाहरू छन्।1. सल्फर फिक्सिंगको साथ ब्लीच। एक ब्रश संग scrub।2. घरमा धूम्रपान कोठा सेट अप गर्नुहोस्।Papter। व्यावसायिक सैन्यहरू। सामान्यतया, बत्तीहरू एक विशेष तेल छ जुन सफा गर्न सकिन्छ। तपाईं यसलाई सिधा निर्माताबाट किन्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंले यो खरीद गर्नुभयो!